Date My Pet » Nahoana Men Queen tantely ny fanasarahana tsy nisy indrafo Love
Last nohavaozina: Sep. 12 2020 | 3 min namaky
Izany dia mampiaraka toerana, ary ny mampiaraka ho an'ny biby tia toerana, tsy misy latsaka. Noho izany no miresaka fotsiny momba ny vehivavy iray minitra alika? Ary tiako ho lazaina “alika vavy” ao amin'ny tena heviny fialàna bàla, tahaka ny tsy mifandray canines, fa ny olombelona mitovy karazana amboa vavy izay manome ny ratsy anarana. Nefa noho izany dia SFW toerana sy amin'ny ezaka mba hanome indray ny vehivavy alika ny fanajana sy ny fitiavana izy ireo mendrika-ndao hiresaka momba ny mafy fo fa tsy Queen tantely (na HQBs) ary ny olona izay tia azy, ary inona no misy dia ny mianatra avy amin'izy ireny hanao ny tsara kokoa ny fifandraisana.
Ny fotoana sy ny fotoana indray, Efa-tanana voalohany ho vavolombelona ny tranga ny “tsara bandy tia HQB”. Tena mahatalanjona tokoa ny mijery-be fiahiana, tsara fanahy fo, mahalala fomba sy ny malala-tanana ny olona izay toa foana ao amin'ny toerana ny hiondrika eo nihemotra noho ny HQB; ary toa tia isa-minitra koa ny mamaly ny fitakiana sy mitondra iharan'izany ny jambany tsinontsinona. Nefa ireo fifandraisana ihany koa ny sasany amin'ireo tsara indrindra hitako eo amin'ny lafiny ela velona; ary toy izany koa, No mamantatra, eo amin'ny resaka fifandraisana misy ambaratongam-fahombiazana.
Noho izany dia inona no azontsika, fa tsara, tsaina dia mianatra avy amin'ny HQBs vehivavy mba hisarihana sy hitandrina ny karazana olona fa toa tsy misy olana nahasarika sy fitandremana?
1) HQBs ny atao hoe ny maha
HQBs hoe iza izy ireo ary inona no tiany. Fantatr'izy ireo izay hahatonga ho eo amin'ny latabatra, ary izy ireo, satria mahaliana ny zavatra mahaliana dia ny, ary mba ho miavaka amin'ny mpiara-miasa ny mahaliana. Efa mankaleo ny mampiaraka ny tenanao, ary HQBs efa noeritreretintsika fa izany avy.
2) HQBs manana didy ny tontolo
An HQB toa manana didy avy amin'ny tontolo manodidina azy (na izy, na tsy tena manao). Io toetra io dia manome ny nohaniny tosika ho azy ny hambom-pon'ny mpiara-miasa, raha manana fanaovana misy lalàna koa apetraky ny sambatra, ary izy no mifehy “The World”, Izy no mifehy ny “The World” ny taratasy fanomezam-pahefana. Tena izany rehetra “raha A = B sy B = C, dia A = C” zavatra. Ahoana no mandika ho mahasoa tendrony? mendrika, tsaina dia ny olona toa ahy sy ianao tsy ho mora tena assertive amin'ny asantsika sy ny fifandraisana. Ny hoe assertive dia samy hafa be noho ny ho tia ady, dia ny fototra M.O. ny salam-HQB ary no manome azy fa tamin-karatsiam, tenuous hifehy “The World”. Fa satria assertive bebe kokoa no didy lehibe kokoa hilefitra ny izao tontolo izao, raha tsy misy ny ratsy raha tsy izany dia vokatry ny herisetra. Ohatra iray amin'izany fotsiny ny milaza izay tianao, ary ny antony mahatonga dikany avy amin'ny fomba fijery, Sans ny nanambany, Miondrika fahatezerana matetika miasa amin'ny fanaovana fangatahana toy izany koa amin'ny HQBs.
3) Ny mandrakizay-malaza sy hitsapana ny, “Men Toy ny Challenge”!
Firy ny lahatsoratra sy ny fiarahana mamaky boky manana izay feno fanoloran-tena ho misy dikan-tenin'ny hevitra fototra izay olona te ho aseho amin'ny zava-tsarotra, ka mahatsapa fanampiny manokana rehefa afaka handresy zava-tsarotra hoe? Fa, ny tenany, no miresaka momba ny fitadiavana ny vehivavy saro-takarina kokoa noho ny manintona kokoa izay dia misy foana-boky misokatra. Indraindray elusiveness haneho ny maha-inona no tokony ho lazaiko-kely kahihitra amin'ny maneho misy karazana fihetseham-po na ny hevitra tsara (izay avy amin'ny toerana HQBs). Misy ny olona dia tsy afaka manohitra ny zava-tsarotra ny miezaka ny tsy ara-dalàna izay mety ho valin mahafinaritra avy amin'ny HQB ka dia lasa zavatra lehibe mahaliana.
Manao ahoana no mety (indray, toy ny mendrika, tsaina dia vehivavy ianao) miala ny tenanao ho bebe kokoa ny maha zava-tsarotra? Mety ho lasa mora foana ny disingenuous lalao-nitsinjaka fa boky toy ny “The Fitsipika” (Fein sy Schneider) rehetra, izay mety tsy miasa ho an'ny rehetra, ary mety hamela anao sy ny fihetseham-po ratsy sahiran-tsaina momba ny zavatra holazainao sy ny fotoana. Fa tsy, hanangana ny fiainanao ho tena feno sy mampientam-po-mahatonga anao ho tena zava-tsarotra ho Fantsiho nidina ny daty amin'ny. Tsy vitan'ny no tsy mijery lavitra izany rehetra “ho sarotra” milaza fa izany ungracefully mampiavaka HQBs (fa ny olona mahita azy manintona), fa ny daty dia hahatsapa bebe kokoa fa sarobidy rehefa efa nanao hevitra mba handany ny fotoana sarobidy mazava tsara aminy.
4) No lalao
Dia tonga ny fotoana, rehefa mamaly ny olona intsony ny ankamatatra lalao, na izany noho ny hatsaran-toetra ireo bebe kokoa ho matotra, na ny fifandraisana mihitsy rehefa lehibe mihoatra noho ny voalohany flirtation. Angamba azo tendron'ny ity, fara fahakeliny, ny ampahany voalaza rehetra "ho ela velona" Manjary nanolotra ny HQB / Nice Guy fifandraisana. HQBs hilaza izay tiany, Ary raha te izany. Vitsy ny lalao sy ny intangibles rehefa mifandray miaraka amin'ny HQB, ary maro ny olona mahita izany mamelombelona. Izany fifandraisana avy amin'ny singa roa teo aloha-in ho toro-hevitra amin'ny fifandraisana mivantana (I.E. maha assertive), ary mazava tsara ny zavatra maniry avy amin'ny mpiara-miasa raha tsy ny efa manome izany, ianao nanolotra fanamby Azo inoana fa tia Rehefa niroso niakatra nitsena satria efa mba toy izany mazava ka tsy matahotra ny ezaka ho zava-poana.
Izany, Tsara fanahy Fo-handray am-po, ary ireo torohevitra am-po-ary koa afaka milaza kely anjara lehibe kokoa ny Nice Guy tsena ho an'ny tenantsika!